Cristiano Ronaldo Oo Amaankiisa Aad Loo Adkeeyey Iyo Laba Nin Oo Aad Ugu Muuqaal Eg Oo Lasoo Bandhigay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo Oo Amaankiisa Aad Loo Adkeeyey Iyo Laba Nin Oo Aad Ugu Muuqaal Eg Oo Lasoo Bandhigay
Cristiano Ronaldo Oo Amaankiisa Aad Loo Adkeeyey Iyo Laba Nin Oo Aad Ugu Muuqaal Eg Oo Lasoo Bandhigay
Cristiano Ronaldo ayaa amaankiis aad loo adkeeyey iyada oo lasoo diyaariyey laba qof oo muuqaalkiisa oo kale leh oo aad ugu eg oo xataa loo xidhay dhegaha uu xidho oo kale, xilli laga duubayay muuqaal cusub oo xayaysiis ah oo ay shirkadda dharka ee Nike ay soo saartay.
37 jirkan ayaa loo qaaday garoomada ku yaalla Cheshire oo ah gobolkaay ku taallo magaalada Manchester, si looga duubo muuqaalo ganacsi oo ay shirkadda Nike ku xayaysiinayso ganacsigeeda.
Laba nin oo aad ugu eg Cristiano Ronaldo ayaa la keenay garoonka, si haddii ay timaaddo cid qashqashaad samaynaysa ay ugu khalkhalaan midka uu yahay Cristiano Ronaldo.
Faahfaahin badan lagama bixin cabsida jirtay iyo sababta amaanka Ronaldo aadka loogu adkeeyey, waxayse muuqaallo lasoo bandhigay muujiyeen iyadoo laba nin oo aad ugu eg Ronaldo ay garoonka joogaan, sidoo kalena u ku labbisan qaabkiisa oo kale.
Xiddigan shanta jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or ayaanay xaaskiisa Georgina Rodriguez joogin goobta wax lagaga duubayay, hase yeeshee waxa jiray ilaalo adag oo dusha sare iyo goobo u dhow ba joogay oo ilaalinaysay Cristiano Ronaldo.
37 jirkan ayaa sannadkii waxa uu shirkadda Nike ka qaataa lacag gaadhaysa £14.7 milyan oo Gini, isaga oo kaliya u sameeya xayaysiisyo, dharkeedana xidha, waana ciyartoyga lacagta ugu badan ka qaata shirkadda isaga oo ka horreeya Neymar, LeBron James, Tiger Woods iyo Rafael Nadal.